१३ मिनेट अघि आजको अर्थ
कोरोना कहरका कारण यतिबेला संसार नै आक्रान्त भएका बेला नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि सरकारले कोरोनाको रोकथामका लागि गरेको लकडाउनका कारण मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भयो । ...
मुड बुस्ट गर्छ लसुनले
हामी दैनिक कामहरु गरिसकेपछि निकै ठूलो तनावमा हुनसक्छौँ । कहिलेकाहीँ केही काम गरौँ भन्दा साथीहरुलाई हामीले जवाफ पनि दिइरहेका हुन्छौँ– मुड छैन यार । मुड नहुनाले हामीले कतिपय काम छोडिरहेका पनि हुनसक्छौँ । अनि मुड बुस्ट हुन्छ भनेर केही खानेकुराहरुलाई...
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले बौद्धदर्शनलाई विश्वव्यापी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । मन्त्रालयमा आज आयोजित बौद्धदर्शन तथा गुम्बा विकास समितिको ९७ औँ बैठकमा मन्त्री भट्टराईले बौद्धदर्शनलाईं विश्वव्यापी बनाउँदै मानव जातिलाई एकीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री भट्टराईले...
मनमैंजुमा छुरा प्रहार गरि एकजनाको हत्या
काठमाडौंको मनमैंजुमा एक जनाको छुरा प्रहार गरि हत्या भएको छ । मृतक नुवाकोटका लक्ष्मण तामाङ भएको खुलेको छ । उनको ग्रिनसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो । उनीमाथि उनकै साथी दोर्जेले छुरा प्रहार गरेका हुन् । त्यहाँको एक खाजाघरमा...
अंकिता बस्थिन् सुशान्तको फ्ल्याटमा !
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको मृत्यु भएको दुई महिना भएको छ । तर, जब उनको मृत्युबारे छानबिन सुरु गरिएको छ, तब नयाँ नयाँ जानकारीहरु आउन थालेका छन् । भारतको केन्द्रीय जाँच ब्युरोले गरेको अनुसन्धानअनुसार अब उनको घरबाट नयाँ तथ्य दिने...
काठमाडौंमा धारिलो हतियार प्रहारबाट एक जनाको मृत्यु
३० साउन, काठमाडौं । काठमाडौंको बानियाँटारमा धारिलो हतियार प्रहारबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । हालसम्म मृत्यु हुनेको परिचय खुलेको छैन । काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीले आफू घटनास्थलतर्फ जाँदै गरेको बताए । काठमाडौं प्रहरीका प्रवक्ता एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरले...
काठमाडौँ । काठमाडौँको मनमैजुस्थित सुमन गोर्खा खाजा घरमा नुवाकोटको २४ वर्षीय लक्ष्मण तामाङको हत्या भएको छ । तार्केश्वर नगरपालिकाको मितेरी पुलस्थित सो खाजा घरमा दोर्जे तामाङसहितको समूहले चक्कुले हानेर लोलाङ हाइट बस्ने लक्ष्मणको हत्या गरेको बताइएको छ । मृतकको शव...
तीन तहका सरकारकाे लाजमर्दाे काम : पहिराे जाने थाहा हुँदाहुँदै तारजाली नपाएर गुमाए सिन्धुपाल्चोकमा ३८ जनाले ज्यान
३८ मिनेट अघि आजको अर्थ
ठूलो पहिरो जाने निश्चित भएको सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–२ लिदिमा राज्यले हारगुहार गर्दा पनि तारजाली व्यवस्था नगरेपछि ३७ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ । २०७२ को भूकम्पले हल्लाएको गाउँलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिमपूर्ण गाउँको सूचिमा राखेपनि पहिरो नियन्त्रणका लागि राज्यले...
३० साउन, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज हेल्थकेयरबाट २८ जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् । गण्डकस्थित हेल्थ केयरका सञ्चालक डा. अबुल हैस अन्सारीका अनुसार उनीहरुको पछिल्लो पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज भएका हुन् । नारायणी अस्पताल अन्तर्गत स्थापना गरिएको १२०...
एजेन्सी । संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनबीचको व्यापार वार्ताबारे शनिबार पूर्व सहमतिअनुसार पहिलो चरणको व्यापार सम्झौताको बारेमा छलफल हुने कार्यक्रम छ । कोरोनाभाइरसले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्नु पहिले दुई आर्थिक शक्तिबीचको सम्बन्धमा समस्या देखिइरहेका समय पूर्व सहमति अनुसार छलफललाई अगाडि बढाउन...
डोटी । विषालु सर्पको डसाइबाट यहाँ ३० वर्षीया एक महिलाको मृत्यु भएको छ । प्रहरीचौकी चवराचौतराका अनुसार बोगटान फुडसिल गाउँपालिका–७ चवराचौतारा बस्ने खिमादेवी धामीको सर्पले डसेर मृत्यु भएको हो । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१ बेलार स्थायी ठेगाना भएकी निज महिला तीजका...
काठमाडौं । हिमालय एयरलाइन्सले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन उद्धार चार्टर्ड उडान तालिका सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारका लागि आगामी भदौ १ गते अर्थात् अगस्त १६ तारेखदेखि उद्धार उडान गरिने एयरलाइन्सले जनाएको छ...
चीनको शेनजेनमा कोरोनाभाइरस एन्टीबडीका साथ बालकको जन्म भएको छ । आमाबाट प्राकृतिक तरिकाले शिशुमा यी एन्टीबडीहरू आएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । शेनजेन थर्ड अस्पतालका चिकित्सकले आमा र बच्चामाथि थप अध्ययन गर्ने बताएका छन् । गत अप्रिल महिनामा आमा कोरोना पोजिटिभ...
१५ दिन काठमाडाैंमा निषेधाज्ञा, के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले केही गतिविधिहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जारी गरेको आदेशअनुसार साउन ३० गते शुक्रबार राति १२ बजेदेखि भदौ १५ गते राति १२ बजेसम्म विभिन्न गतिविधिमा रोक लगाइएको छ । जारी आदेशअनुसार...
काठमाडौं : कोरोना कहरका कारण यतिबेला संसार नै आक्रान्त भएका बेला नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन। सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि सरकारले कोरोनाको रोकथामका लागि गरेको लकडाउनका कारण मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भयो। अन्य क्षेत्र जस्तै बैंक...
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट जोगिन जनता आफैँले पनि आफ्नो सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। सदरमुकाममा आज आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिन नागरिक आफू पनि सचेत भएर लाग्नुपर्ने जोड दिएका हुन्। 'नागरिक...
कोभिड–१९ महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारका लागि आगामी भदौ १ गते अर्थात् अगस्त १७ तारेखदेखि उद्धार उडान गरिने भएको छ ।नेपालका दुई नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) र हिमालय एयरलाइन्ससहित विभिन्न विदेशी एयरलाइन्सले नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन उद्धार चार्टर्ड...
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउपालिका-२, लिदीमा आज बिहान गएको पहिरोबाट विस्थापित परिवारका लागि आवश्यक राहत तथा उद्धार सामाग्री लिएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' आज सो गाउँमा पुगेका छन् । उनले स्थानीयसँग उद्दार र राहतका बारेमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे...
३० साउन, काठमाडौं । ३९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि काठमाडौं महनगरपालिका वडा नं १४ ले बुधबारदेखि आफ्नो वडा सिल गरेको छ । सिल भएको वडाको भित्री कथाचाहिँ अलि फरक देखिएको छ । यस वडामा ७ हजार ८४६ घरपरिवारको बसोबास छ...
कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि दोलखा जिल्लामा आगामी भदौ ६ गतेसम्मका लागि लकडाउन घोषणा गरिएको छ । आज साँझ बसेको जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले दोलखामा बन्दाबन्दी गर्ने निर्णय गरेको हो । जिल्लाका केही स्थानीय तहमा समेत कोभिड –१९...
इजरायलको सबभन्दा ठूलो मेडिकल सेन्टरले कुनै व्यक्ति कोरोनाभाइरसबाट संक्रमण भए नभएको एक सेकेन्डभित्र पत्ता लगाउने परीक्षण थालेको बिहीवार जनाएको छ । परीक्षणका क्रममा मानिसहरूलाई नूनपानी दिएर कुल्ला गर्न लगाइयो अनि एउटा भाँडोमा थुक्न लगाइयो । त्यसपछि त्यसलाई सानो स्पेक्ट्रल डिभाइसले...
'जोखिममा छौं' भनेर प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म गुहार्दा कसैले सुनेन, अन्ततः उजाडियो लिदी गाउँ !
शुक्रवार बिहानको भीषण पहिरोले सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिकास्थित लिदी गाउँ पुर्दा ३८ जना बेपत्ता भएका छन्, ४ जनाको शव फेला परेको छ । निरन्तर परेको पानीसँगै खसेको पहिरोले लामा गाउँका ३७ घर पूर्ण रूपमा पुरिएका छन् । घटनास्थलमा अहिले प्रहरी, सेना...
मनसुन सुरू भएदेखि सिन्धुपाल्चोकमा तारनतार धपेडी छ। शुक्रबार बिहान यहाँ फेरि पहिरो गयो। जुगल गाउँपालिका–२, लिदीमा बिहान ६ बजेतिर खसेको पहिरो बलेफी खोलासम्म झरेको स्थानीय बताउँछन्। अहिलेसम्म चार जनाको शव भेटिएको छ भने ३८ जना पुरिएको पुष्टि भएको छ। दुई...
काठमाडौं : नेपाल धितोपत्र बोर्डले चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बढीको साधारण शेयर निष्काशनका लागि पाइपलाइनमा रहेको बताएको छ। बोर्डले बीमा, लघुवित्त र जलविद्युत र अन्य गरी हालसम्म ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बढीको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशनको लागि आवेदन परेको...